Wasiirka Dhallinyarada iyo Isboortiga oo faah faahin ka bixiyay shir uu uga soo qeybgalay Jabuuti “Sawirro” – Radio Muqdisho
Wasiirka Dhallinyarada iyo Isboortiga oo faah faahin ka bixiyay shir uu uga soo qeybgalay Jabuuti “Sawirro”
Wasiirka dhalinyarada iyo cayaaraha iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa faah faahin ka bixiyay waxyaabihii ka soo baxay shirka Wasiirada Cayaaraha ee Urur Goboleedka IGAD oo lagu soo gabo gabeeyay Dalka Jabuuti
Mudane Maxamed Cabdullaahi Xasan (Nuux) Wasiirka Dhalinyarada iyo Isboortiga ee xukuumadda Soomaaliya oo dib ugu soo laabtay dalka ayaa waxaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cadde ku so dhaweeyay mas’uuliyin ka tirsan labada gole ee dowladda, agaasimaha guud ee Wasaaradda dhalinyarada Mudane Daahir Cabdi Cabdullaahi iyo xubno kale.
Wasiirka oo shir jaraa’id ku qabtay garoonka Aadan Cadde ayaa hoosta ka xariiqay in shirka Wasiirada Isboortiga ee IGAD lagu heshiiyay in iskaashi xagga isboortiga ay yeeshaan dalalka IGAD, isla markaana labadii sano mar la qabto tartamo isboorti oo lagu horumarinayo dhalinyarada iyo isboortiga.
“Waxaa la isku raacay in la qabto tartamo isboorti, si loo dhiirigeliyo dhalinyarada, waxaa kaloo la sheegay in tartanka ugu horeeya lagu qaban doono dalka Jabuuti, marka arrinta ugu muhiimsan waxa ay tahay in iskaashi xagga horumarinta Isboortiga la yeesho” ayuu yiri Wasiirka Dhalinyarada iyo Isboortiga.
Mudane Maxamed Cabdullaahi Xasan (Nuux) ayaa xusay in uu kulan gaar ah la yeeshay dhigiisa dalka Sudan oo ay ka wada hadleen sidii Soomaaliya gacan looga siin lahaa horumarinta isboortiga, ayna Soomaaliya u soo diri doonaan quburo arrimahaasi kala shaqeeya.
Wasiirka dhalinyarada iyo Isboortiga ee Soomaaliya waxa uu tilmaamay inay furi doonaan akadeemiyad lagu tababarayo bahda jecel isboortiga iyo in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada, si looga weeciyo afkaaraha qaldan ee ay Shabaabku ku marin habaabinayaan dhalinyarada, isla markaana ay u noqdaan kuwa ka qeyb qaata nabadgelyada iyo horumarka dalka.
Wasiirka Maaliyadda XFS oo shir looga hadlayo arrimaha maaliyadda uga qayb galay Dalka Kuwait
Dowladda Uganda oo ka hadashay Qabashada Wakiilkii Argagixisada Al Shabaab ee Dalkaas oo la qabtay